Nder ၏အမျိုးသမီးများ - ဆီနီဂေါနိုင်ငံမှကျွန်စနစ်ကိုခုခံသောတိုက်ခိုက်သူများ - Afrikhepri Fondation
Nder မှအမျိုးသမီးများ - ကျွန်ဘဝကိုဆီနီဂေါနိုင်ငံမှခုခံခြင်း
V၎င်းသည်ဆီနီဂေါနိုင်ငံ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေခဲ့သောအထူးကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၁၈၁၉ နိုဝင်ဘာလတွင်အင်္ဂါနေ့တွင်နူဒါအမျိုးသမီးများအကြားစုပေါင်းကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့ကြသည့် Moorish ကျွန်များလက်ထဲသို့မကျရောက်ရန်
ထိုအချိန်တွင်ဝေါလိုသည်ဆီနီဂေါမြစ်ဝတွင်တည်ရှိသောချမ်းသာကြွယ်ဝသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသခံများ၊ ငြိမ်းချမ်းသောလယ်သမားများသည်ဆာဟာရအလွန်ကုန်သွယ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး မှနေ၍ ဆီနီဂေါနိုင်ငံ၏ပထမ ဦး ဆုံးကိုလိုနီမြို့တော်ဖြစ်သည့်စိန့်လူးဝစ္စပြည်သူလူထုနှင့်ကုန်သွယ်မှုမှ နေ၍ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကိုရောင်းချခဲ့သည်။ Walo သည် Mauritania နှင့် Trarzas အနွယ်တည်ထောင်ရာ Walo ကိုခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းတို့မှကုန်ပစ္စည်းများဖလှယ်ရန်ဖောက်သည်များအဖြစ်ရောက်ရှိမည်လား၊ သုံ့ပန်းများအဖြစ်ဆီဖြည့်ရန်ရန်သူများအဖြစ်သူတို့ဆင်းသက်မည်ဆိုသည်ကိုကြိုတင်မသိရှိခဲ့ပါ။ သို့တိုင်၊ Saint-Louis တွင်ပြင်သစ်တပ်များတပ်ဆင်ပြီးကတည်းက Moors သည်ဒေသအားလွှမ်းမိုးမှုအောက်သို့ကျရောက်စေရန်သူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်စေလိုသော Walo ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေသည်။ ဥရောပ။
ထိုနှစ်တွင်ကြာရှည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောကာလသည် Moor စစ်သူရဲများနှင့်သူတို့၏ Toucouleurs မဟာမိတ်များထပ်မံအနိုင်ရသောအကြမ်းဖက်ပclိပက္ခများနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ခြောက်သွေ့ရာသီရဲ့အစမှာရှိခဲ့ပြီး Nder နှေးကွေးနေတယ်။ The Brack (King) သည်စိန့်လူးဝစ္စတွင်ရှိခဲ့ပြီး Ntaggar တိုက်ပွဲတွင် Moors များနှင့်တိုက်ခိုက်သည့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထုံးစံအတိုင်းဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်အသရေရှိသူများသည်ခရီးစဉ်သို့ရောက်ရှိနေပြီးမြင်းစီးသူရဲကောင်းများလည်းလိုက်ပါခဲ့ကြသည်။
ဤသည်အင်္ဂါနေ့သည်အခြားနေ့ရက်များကဲ့သို့အမျိုးသားများသည်အရုဏ်တက်ချိန်တွင်သူတို့၏ပခုံးပေါ်ရှိဓား (ရိုးရာပေါက်စ) လယ်ကွင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခြားသူများကမူအမဲလိုက်ကြသည်၊ တတိယအုပ်စုသည်သူတို့၏ငါးဖမ်းလှေများစီးသည့်မြစ်ကို ဦး တည်သွားခဲ့သည်။ ceddos (စစ်သား) အနည်းငယ်သာတပ်ထဲ၌ကျန်နေခဲ့ပြီးသူတို့၏ကြီးမားသောနို့ရိုင်ဖယ်များကိုမဆိုင်းမတွသုတ်ဆေးကြောကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပေးအပ်သည့်တဲများပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျေးရွာတွင်နေ့စဉ်ဘဝများရှိသည်။ အဆိုပါ pestle မှုတ်, တစ်ရှုပ်ထွေးပတ်ပတ်လည်၌, ပြောင်းဆန်ကြိတ်၏ပြင်းထန်မှုနှစ်ဆတိုး။ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရင်းအခွင့်အလမ်းများအတွင်းအချင်းချင်းကိုအော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အခြားသူများကမူနောက်ဆုံးရိတ်သိမ်းသိမ်းဆည်းထားသည့်စပါးကျီများပတ်လည်တွင်အလုပ်များနေကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အနည်းငယ်သည်ရွာရင်ပြင်တွင်တိတ်တဆိတ်စကားများပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ကလေးငယ်များသည် palaver သစ်ပင်တဝိုက်ဆူညံစွာ လိုက်၍ ညနေခင်းတွင်အကြီးအကဲများသည်အတိတ်၏အဖြစ်အပျက်များကိုဖွင့်ဟခဲ့သည်။
ရုတ်တရက်ကြောက်လန့်တကြားအော်သံကထိုနေရာ၏ငြိမ်သက်မှုကိုပျက်ပြားစေသည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုရယ်မောခြင်းကအေးခဲသွားတယ်။ အန်တီဝင်ပေါက်ကိုတွန်းပို့လိုက်သောဒီပတ်ပတ်လည်နံရံသည်အကိုင်းအခက်များနှင့်ရွှံ့စေးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမိန်းမကိုမျက်စိအားလုံးတည့်တည့်ကြည့်ပြီးထိုးစစ်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျေးရွာများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သူမ၏လက်များတွင်ပါရှိသော calabash သည်ရေများနှင့်ပြည့်နေသော်လည်း၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများမှလွတ်နေသော်လည်းမိန်းမကကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်သည်။ အဆိုပါ Moore ကဒီမှာရှိပါတယ်! သူတို့ရောက်ရှိသည် ! ငါ Guier ရေကန်ရဲ့အစွန်းမှာရှိပြီးသူတို့ကိုကျူပင်တွေဖြတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ Moors တစ်ခုစစ်တပ်! Amar Ould Mokhtar ဦး ဆောင်သော Toucouleurs တပ်ဖွဲ့များသူတို့နှင့်သူတို့ရှိသည်။ သူတို့ကမြစ်ကိုကူးဖြတ်ပြီးငါတို့ရွာကိုလာကြတယ်။ "
အမျိုးသမီးများသည်တစ်ချိန်တည်း၌ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။ Moor တွေကတော့ Walo မှာ ၀ င်ရောက်စီးနင်းလာကြတယ်။ မြောက်အာဖရိကရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိသားစုများကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားရန်အတွက်ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေးအမြောက်အများကိုသူတို့၏မိသားစုများမှဆွဲထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ အဲဒီလိုပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Nder ကအဲ့ဒီမှာသားသမီးအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
သူတို့ကအမြိုးသားအမြိုးသားမြား၌ပုန်းအောင်းရန်, ၎င်းတို့၏အကြီးအကဲများ ဦး ဆောင်သောအိမ်နီးချင်းလယ်ကွင်းသို့ကလေးများအလျင်အမြန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့တဲများသို့အပြေးအလွှားသွားပြီးထွက်လာရန်အ ၀ တ်ထည်များနှင့်အိတ်များဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ အချို့မှာခင်ပွန်းသည်များ၊ အချို့မှာဖခင်နှင့်အတူအချို့၊ ယောက်ျားရဲ့ ဦး ထုပ်အောက်မှာဝှက်ထားသောဆံပင်။ သူတို့ဟာကာကွယ်ရေးအတွက်သုံးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဖြတ်၊ လှံ၊ ကလပ်နဲ့သူတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကိုင်တွယ်တော့မယ့်စစ်မှန်ရိုင်ဖယ်များတပ်ဆင်ထားကြသည်။
တစ်နေ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဤအမျိုးသမီးများသည်စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၏စွမ်းအင်နှင့်တိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်များ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်လူငယ်များနှင့်လူငယ်များသည်သူတို့၏ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်မောင်းနှင်လာပြီးရန်သူနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ထူးခြားသောမိန်းမများကိုအမှတ်ရခြင်းဖြင့်ကျင်းပသောသူတို့၏သီချင်းများတွင်အာဖရိကသမိုင်း၏စာမျက်နှာများကိုသရုပ်ဖော်သူများမှထိုနေ့တွင် Moors သုံးရာကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲသို့သော်မညီမညာဖြစ်နေသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ceddos လျင်မြန်စွာဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဖုန်မှုန့်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့သွေးစီးဝင်နေသောသွေးနီများရွှံ့ထဲတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ လူသေအလောင်းတွေတွေ့နေရတယ်။
လက်နက်မဲ့လက်နက်များရှိသော်လည်းရန်သူကော်ပိုရေးရှင်းထက်များပြားသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ပြင်းထန်သောသန္နိdetermination္ဌာန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်အမ်မာအူလ်ဒူမိုဟာတာကသူ၏တပ်များကိုလူစုခွဲရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သဲကန္တာရမှမြင်းစီးသူရဲများသည်သူတို့၏ချွန်ထက်သောသတ္တဝါများကိုစွန့်ခွာ။ ဒဏ်ရာရသူများကိုတင်ပါးပေါ် တင်၍ ရေအိုင်ထဲသို့ကူးပြန်ကြသည်။ သာမန်အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ထားခြင်းခံရသည်ကိုရဲရဲရဲရဲရဲသော်လည်းသတ္တိရှိသော်လည်းတာရှည်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း Moorish အကြီးအကဲကသိသည်။ သူသည်ကုန်သွယ်မှုကိုမထိခိုက်စေလို။ ကျွန်စျေးကွက်များ၌စျေးနှုန်းချိုသာစွာရရန်၎င်းတို့အားရှင်သန်စေရန်အလို့ငှာအနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဝေါလိုအမျိုးသမီးများသည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့၏အစွမ်းအစကြောင့်ဒုတိယတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့မခံနိုင်ခဲ့ကြပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်၍၊ ကြိုးစားသောသူတို့ကိုအလျင်အမြန်စစ်ကြော။ ၊ မျှော်လင့်ချက်အားလုံးအချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများနေ့ Nder! ထိုက်တန်မိန်းကလေးငယ်များ Walo! တက်ဖြောင့်နှင့်သင့်ပုဆိုးပြန်ရ!
ထို့နောက်အသံသည်ဆူညံသံများ၊ မြည်တမ်းစကားများနှင့်နာကြည်းခြင်းဝေဒနာများအထက်တွင်ပေါ်လာသည်။ Linguère (Queen) Faty Yamar ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော Mbarka Dia ဖြစ်သည်။ မိဖုရားကိုဝိုင်းရံထားသောလုံ့လ ရှိ၍ အာဏာရှင်တရားရုံးများကိုနာခံရန်သူမတစ် ဦး တည်းသိခဲ့သည်။ သူမကိုယ်တိုင်ပင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့်အပင်ကိုဒူး ထောက်၍ သူ၏အဖော်များကိုစောင်းမြောင်းလိုက်သည်။
"Nder အမျိုးသမီးများ!" Walo ၏ထိုက်တန်သောသမီးများ! မင်းရဲ့ခါးကြိုးတွေကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းထည်နဲ့ချည်ထားပါ။ သေဖို့ပြင်ဆင်ပါ။ Nder အမျိုးသမီးများ၊ ငါတို့ဟာကျူးကျော်သူတွေဆီကနေအမြဲဆုတ်ခွာသင့်သလား။ ငါတို့၏လူတို့သည်ဝေးသောကြောင့်၊ ငါတို့အော်ဟစ်သံကိုနားမထောင်ကြ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေလုံခြုံတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်၎င်းတို့အားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုသိတော်မူမည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခင်ပြန်လည်စတင်တော့မယ့်ဒီစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူတွေကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ "
ငါတို့ကိုရှာမတွေ့လျှင်အဘယ်မှာပုန်းရှောင်နိုင်မည်နည်း။ ငါတို့ရှေ့မှာငါတို့အမိများနှင့်အဘွားများကဲ့သို့ငါတို့ကိုဖမ်းဆီးလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိုမြစ်တား။ ကျွန်ခံစေခြင်းငှါရောင်းမည်။ ဒီကံကြမ္မာဟာငါတို့နဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လား။ "
ငိုသံသည်ရပ်တန့်သွားသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာညည်းတွားရပ်နေ၏တုံ့ပြန်! မင်းသွေးပြန်ကြောထဲမှာဘာရှိလဲ သွေးလား၊ နောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြေးများနှင့်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များကိုမင်းကိုပြောပြချင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာသေဖို့သတ္တိရှိခဲ့တယ်။ "
သေခြင်း! ဒီစကားလုံးမှာမှိုင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရောက်လာတယ်။ သေပြီ Mbarka Dia ဘာပြောနေလဲ "" ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ခံသည်မဟုတ်၊ ကျွန်ခံသည်သာမက၊ သဘောတူတဲ့သူတွေဟာ Sages ကောင်စီရဲ့ box ထဲမှာကျွန်တော့်ကိုလိုက်ကြပါစေ။ ငါတို့ရှိသမျှသည် ဝင်၍ မီးရှို့ကြလိမ့်မည်။ ငါတို့၏ရန်သူများကိုမီးဖိုကဲ့သို့၎င်း၊ ငါ့နှမများထကြ။ အခြားလမ်းမရှိသောကြောင့်ဝေါလိုအမျိုးသမီးများကဲ့သို့သေကြကုန်အံ့! "...
နေကယခုကောင်းကင်၌မြင့်မားနေသည်။ ရွာသားများကတိတ်ဆိတ်စွာတိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့်အသံတိတ်နေသောအမျိုးသမီးများသည်ကျေးရွာအလယ်တွင်မြင့်တက်လာပြီးကြီးမားသောတဲသို့ ဦး တည်သွားကြသည်။ မည်သူမျှ Mbarka Dia ကိုဆန့်ကျင်ဝံ့ဝံ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့၏သတ္တိ၏ပဲ့တင်သံသည်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်တည်း။ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်သူတို့သည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အကျွမ်းတ ၀ င်ပုံစံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခဲ့ကြသည်၊ မျက်လုံးများမျက်ရည်များစီးကျလာခဲ့ကြပြီးကြောက်လန့်နေသည့်ကြက်ငှက်များ၊ လုယက်သည့်စပါးကျီများ၊ မြေပြင်ပေါ်တွင်စွန့်ပစ်ထားသောပိုးမွှားများ၊ မှောက်ထားသောအိုးများ၊ အပူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်မှာဖောင်းဖို့ ...
ဒီတော့သူတို့ကတဲကြီးထဲစုပြုံသွားတယ်။ မွေးကင်းစကလေးများနှင့်ခွဲမနေချင်သောငယ်ရွယ်သောမိခင်အနည်းငယ်ကသူတို့ကိုရင်ဘတ်တွင်ပွေ့ဖက်လိုက်သည်။ အခန်းထဲ ၀ င်ရန်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးသူမ၏သက်တမ်းနှင့်နီးသည်။ Mbarka Dia တံခါးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ တိကျသောအမူအရာဖြင့်သူသည်မီးရှူးကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးတုန်ခါခြင်းမရှိဘဲဌာနခွဲများ၏မျက်နှာစာများထဲမှတစ်ခုကိုပစ်ချလိုက်သည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ကြီးစွာသောမီးလျှံ ထွက်၍၊ တဲအတွင်း၌မိန်းမများသည်တွယ်ကပ်၊ အတူတကွဆုံစည်းခြင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ချူချာခြင်းနှင့်ဟောင်းနွမ်းမှုများကိုပေးဆပ်သကဲ့သို့သီဆိုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဓမ္မသီချင်းမှေးမှိန်စတင် ... ချက်ချင်းချောင်းဆိုးခြင်း၏အကြမ်းဖက်ကိုက်ညီမှုဖြင့်အစားထိုး။ ထို့နောက်မိခင်ဖြစ်သူသည်သူမ၏ရှင်သန်ရပ်တည်မှုကိုညွှန်ပြကာတံခါးကိုကြမ်းတမ်းစွာကန်လိုက်ပြီးလေထဲတွင်ရှူရှိုက်မိသည့်အပြင်သူမဖုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ထွက်သွားသည့်အပြင်ဘက်သို့ပြေးထွက်သွားခဲ့သည်။ ။ အသက်ရှင်သေးတဲ့သူတို့ကမလှုပ်ရှားခဲ့ကြဘူး။ အချို့က“ သူမကိုထားခဲ့ပါ” ဟုတိုးတိုးပြောရန်အချိန်ရှိခဲ့သည် သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကြောင်းကိုသက်သေခံမည်ဖြစ်ပြီးသားစဉ်မြေးဆက်အတွက်သူ၏သားများကိုပြောပြမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားပြောပြလိမ့်မည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသေးသောသူများသည်သူတို့၏ဆုတောင်းပဌနာသီချင်းများ၊ ဤဓာတ်မတည့်သည့်ခေါင်းတလား၌ဆက်လက်ရှိနေရန်သတ္တိကိုဆက်လက်ရှာဖွေကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်အသံတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ် ... ရုတ်တရက်၊ မီးတောက်တွေတောက်လောင်နေတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သဲကန္တာရကြီးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တယ် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုခေါင်မိုးပြိုကျသွားသည်။ ရွာကိုကူညီဖို့နောက်ကျလွန်းတဲ့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တာကသေစေလောက်တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုပဲ။ Nder ရဲ့မိန်းမတွေအားလုံးသေကြပြီ။ တစ် ဦး မှလွဲ။
ရှေးခေတ်ကပြောတာကဒီအချိန်မှာကြီးမားတဲ့အမှောင်တိမ်ကြီးတွေကကောင်းကင်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးအရာရာတိုင်းဟာမှောင်မိုက်ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့၏မိဘများ၊ သားသမီးများနှင့်ခင်ပွန်းသည်များ၏နာကျင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အလားသူတို့ငိုကြွေးခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်အချိန်ပင်မနှစ်မြို့ခြင်းတို့သည်စိတ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်သောစိတ်ပျက်အားလျော့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို နေ့မှစ၍ ၎င်းသည်အလွန်ကြာမြင့်စွာကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိပြီးထိုဘိန်းဖြူများ၏အမှတ်တရများကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Nata ကျေးရွာတွင် Talata Nder ဟုခေါ်သောဘာသာရေးထုံးတမ်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နို ၀ င်ဘာလအင်္ဂါနေ့တွင်ဤနေ့ရက်သည်အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ မိန်းမများနှင့်လူကြီးလူငယ်များသည်နာရီပေါင်းများစွာဆုတောင်း။ နာဒါအမျိုးသမီးများ၏ပူဇော်သကာကိုကြည်ညိုလေးမြတ်ရန်သူတို့၏အခွင့်အလမ်းများကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။
ဒီနေ့ဝိုလိုမှာရှိတဲ့ဒီရွာလေးဟာမှတ်ဥာဏ်လိုမျိုးသဘာဝတရားကြောင့်စွန့်ပစ်ခံရပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီလို့ငါပြောတယ်။ အဲဒီမှာရေးထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်မိခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုက်တန်သော Nder ဘိုးဘေးများသည်ငါတို့အားစွန့်ခွာစေသောသူရဲကောင်းဝါဒ၌ဤလှပသောသင်ခန်းစာပြီးနောက်လျစ်လျူရှုခြင်းထက်ပိုကောင်းသင့်သည်မဟုတ်လော။
SOURCE မှ: အာဖရိကဘုရင်မနှင့် Sylvia Serbin ၏လူမည်းပြည်ပရောက်သူရဲကောင်းများ။
Deepak Chopra သည်ကုသခြင်း၊ ကွမ်တမ်ရူပဗေဒနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းပြောဆိုသည်